प्रचण्डको सिफारिसमा जोशी प्रमुख आयुक्त बन्दै – Metro Today Weekly
प्रचण्डको सिफारिसमा जोशी प्रमुख आयुक्त बन्दै
प्रकाशित : २८ भाद्र २०७७, आईतवार १६:२२
अख्तियार प्रमुखमा अहिले कार्यरत रहेका दुईमध्ये एकजना प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुदैछन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई जनामध्ये एक जनालाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा जोशीलाई नियुक्त गर्ने तयारी बालुवाटार र शीतलनिवासको छ । प्रधानमन्त्री पद जोगाउन निर्णायक भूमिकामा रहेर सहमति गरेका प्रचण्डलाई संवैधानिक आयोगको नियुक्तमा विशेष स्थान दिने ओलीको वचन रहेको चर्चा छ ।
सोही अनुसार पनि यसपटक अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रचण्डकै सिफारिस अनुसार जोशीलाई नियुक्त गर्ने तयारी बढेको हो । तर जोशी उमेर हदका कारण आगामी चैतसम्म मात्रै अख्तियारकाे प्रमुख आयुक्तमा बहाल रहन पाउनेछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे आज बिदा हुदैछन् । अनिवार्य अवकाशका कारण घिमिरे प्रमुख आयुक्तका रूपमा झण्डै दुई बर्षको कार्यकाल बिताएर बिदा हुन लागेका हुन् । उनको बिदाईमा आज अख्तियार कार्यालय टंगालमा विशेष सभाको आयोजना गरिएको छ ।
आफ्नो कार्यकालमा घिमिरे बढी विवादमा परे । उनले घुस खाने कसैलाई पनि नछाडेको दावी गरे । तर ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका कसैलाई पनि अनुसन्धानमा तानेनन् । ०७५ असोज ४ मा गते अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका उनी २३ महिने कार्यकाल पूरा गरेर आइतबार बिदा हुन लागेका हुन् ।
उनको कार्यकालमा बालुवाटार जग्गा काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको ओम्नी काण्ड, तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकूल बाँस्कोटालाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण लगायतका थुप्रै फाइलमाथि अख्तियारले दृष्टि राखेन । बरु सत्ताकै चाकरी गर्न ठूला भ्रष्टाचारकाण्डका फाइल तामेलीमा राखेर थप आलोचित भयो ।
एमालेमा पुनः एकताको पहल २८ भाद्र २०७७, आईतवार १६:२२
पत्रकार महासंघको अध्यक्ष अझै आचार्य २८ भाद्र २०७७, आईतवार १६:२२
सञ्चारमा माओवादी एजेण्डा घुसाउन को सक्रिय ? २८ भाद्र २०७७, आईतवार १६:२२
पत्रकार महासंघकी माओवादी केन्द्र ? खोप र राहत सहयोग समेत चलखेल २८ भाद्र २०७७, आईतवार १६:२२
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, को थपिएलान् सात मन्त्री ? २८ भाद्र २०७७, आईतवार १६:२२